Nolazain’ilay Tranonkala Namoaka azy Hoe Faikany ny ‘ Bilaogy Yanukovych ’ · Global Voices teny Malagasy
Nolazain'ilay Tranonkala Namoaka azy Hoe Faikany ny ‘ Bilaogy Yanukovych ’
Voadika ny 17 Janoary 2017 2:09 GMT
Loharano: Thierry Ehrmann, Flickr.
Nofafàn'ireo toniandahatsoratra, roa herinandro latsaka kely taorian'ny nivoahany voalohany tamin'ny tranonkalam-baovao Korrespondent, ny bilaogy iray lazaina fa ny filoha teo aloha tao Okraina, Viktor Yanukovych, no manoratra azy.
Tao anaty imailaka iray, nilaza tamin'ny RuNet Echo i Maxim Minin, lehiben'ny toniandahatsoratry ny Korrespondent.net hoe nanapaka hevitra ireo toniandahatsoratra ao amin'ny tranonkala ny hamafa ilay bilaogy satria tsy nanome porofo manamarina ny momba azy ny mpanoratra. “Tsy nifandray mivantana tamin'ireo toniandahatsoratra mihitsy izy mba hanamafy ny mombamomba azy. Noho izany, noheverinay ho toy ny faikany ilay bilaogy.”
Nampian'i Minin hoe raha tena izy ilay bilaogy, tsy hisalasala hamoaka azy io ny Korrespondent, raha mbola tsy nanitsakitsaka ny lalàna Okrainiana ireo lahatsoratry ny mpanoratra. Tsy miverina mijery bilaogy natao ho an'ny daholobe ireo toniandahatsoratry ny Korrespondent alohan'ny famoahana azy ireny, saingy mifidy ny hanadihady ny maha-tena izy ilay bilaogy navoaka tamin'ny anaran'i Yanukovych noho ny dokambarotra naterany.
Pikantsarin'ny pejy izay nampiantrano ny lahatsoratra voalohan'ilay bilaogy nolazaina fa nosoratan'ilay filoha teo aloha tao Okraina, Viktor Yanukovych.
Bilaogy iray nitondra ny lohateny hoe “Ilya Ponomarev—Bandy iray tsy misy ilàna azy” no voalohany nivoaka tao amin'ny Korrespondent.net ny 29 Desambra 2016 nampiasàna ny anaran'ny mpanoratra hoe Viktor Yanukovych, “olom-panjakana sady politisiana efa indroa no praiminisitra sy filohan'i Okraina.” Nampangain'ilay lahatsoratra ho miasa ho an'ny CIA. i Ponomarev, Rosiana mpanao politika izay hany mpikambana ao amin'ny parlemanta nifidy nanohitra ny fakàn'i Rosia an'i Krimea tamin'ny Martsa 2014, ary ankehitriny monina an-tsesitany any Kiev.
Andiana bilaogy efatra mifandraindraika amin'io no nanontany hoe “Iza no nandentika ny EuroMaidan ho anaty Rà?” sady niampanga ireo mpanao gazety lasa parlemantera, Mustafa Nayyem sy Sergii Leshchenko tamin'ny fikononkononana ny revolisiona EuroMaidan, izay nanongotra an'i Yanukovych tamin'ny Febroary 2014. Ny lahatsoratra farany, tamin'ny 7 Janoary, dia nitondra ny lohateny hoe “Inona no Nitranga tao Maidan ny 11 Desambra 2013. Victoria Nuland. Mofo sy Bisikoitra,” nentina nanondro ny Sekretera Lefitra ao amin'ny Departemanta Amerikàna misahana ny raharaha Eoropeana sy ny momba an'i Eoropa sy Azia, izay voakiana noho ny nanolorany sakafo ho an'ireo mpanao hetsipanoherana nandritry ny Revolisiona EuroMaidan.
Taorian'ny nionganany tamin'ny Febroary 2014, nandositra an'i Rosia i Yanukovych, nisy fanampiana avy any Maosko. Tato anatin'ny taona telo farany, matetitetika nanao resadresaka ho an'ny gazety izy tao an-tanànan'i Rostov-on-Don any atsimo andrefan'i Rosia, saingy tsy dia mafàna fo ara-politika — na farafaharatsiny imasom-bahoaka.
Serhiy Kurchenko no mifehy ny Korrespondent, izy izay mpiaradia amin'i Yanukoyvch no fahitàna azy.
Tantaran'ny Okraina farany
07 Jona 2021Eoropa Afovoany & Atsinanana
WATCH: Inona no lazain'ny Eurovision antsika momba an'i Eoropa